Where To Stay - Oway Travel and Tours
Oway Launched International Hotel Booking Platform
May 7, 2020Oway
Oway has completed its online travel product portfolio by launching Myanmar’s first international hotel booking platform on oway.com.mm. This new feature will allow the travellers ...
ပိတ္ရက္ေတြမွာ အပန္းေျဖအနားယူဖို႔ Staycation ကို ဘာေၾကာင့္ ေရြးခ်ယ္သင့္လဲ?
December 20, 2018Oway
<English Version Below> ေန႔စဥ္က်င္လည္ေနရတဲ့ ၿငီးေငြ႔စရာပတ္၀န္းက်င္ကေန ႐ုန္းထြက္ၿပီး အပန္းေျဖအနားယူခ်င္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ခရီးတစ္ခုထြက္ဖုိ႔အတြက္လည္း အခ်ိန္မေပးႏိုင္ဘူး။ ဒီလုိမိတ္ေဆြေတြအတြက္ဆိုရင္ေတာ့ Staycation က အသင့္ေတာ္ဆံုးပါပဲ။ “Stay” နဲ႔ “Vacation” ဆိုတဲ့ စာလံုးႏွစ္လံုးေပါင္းစပ္ထားတဲ့ “Staycation” ဆိုတာကေတာ့ ကိုယ္နဲ႔နီးနီးနားနား ဟိုတယ္ေတြ၊ Resort ေတြမွာ ...
September 27, 2018Oway
ခေတ်မီနည်းပညာတွေနဲ့ တိုးတက်ပြောင်းလဲလာတဲ့ယနေ့ခေတ်မှာ ကိုလိုနီခေတ်ဗိသုကာလက်ရာတွေကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဆဲလျက်ရှိတဲ့ ရန်ကုန်မြို့က ဟိုတယ်အချို့ကို Oway ခရီးသွားမိတ်ဆွေတွေအတွက် ဝေမျှပေးလိုက်ပါရစေ။ The Strand Hotel ၁၉၀၁ ခုနှစ်ကတည်ဆောက်ခဲ့တဲ့ Strand Hotel ဟာ ရန်ကုန်မြို့ရဲ့သက်တမ်းအရင့်ဆုံးဟိုတယ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်စာရင်းမှာပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ ခန့်ညားထည်ဝါတဲ့ မျက်နှာကျက်အမြင့်ကြီးတွေ၊ ကြိမ်ထည်ပရိဘောဂတွေနဲ့ စကျင်ကျောက်ကြမ်းပြင်တွေဟာ Strand Hotel ရဲ့ပြယုဂ်တွေပါပဲ။ Belmond ...